Furaha Birta Iftiinka leh ee lagu dhejiyay Maska Vending Machine-News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Furaha Birta Iftiinka leh ee lagu dhejiyay Mashiinka Mashiinka Mashiinka Maska
Waqtiga: 2020-05-19 Hits: 36
Qalabka sameeya qalabka ciyaaraha Razer wuxuu hadafkiisu yahay inuu bixiyo malaayiin waji-xumo wejiga ah oo ku yaal Singapore xilli dalku uu la soo boodey kiiskii dhowaan ku soo kordhay kiisaska cudurka coronavirus.
Mashiinnada iibinta maaskaro wejiga ayaa billaabmaya inay ku faafaan Aasiya iyada oo alaab-qeybiyeyaashu ay raadinayaan qaabab fudud oo si toos ah loogu gaarsiin karo dadweynaha. Bishii la soo dhaafay, nin caan ka ah aruurinta farshaxanka ayaa sidoo kale sheegay in uu u qaybin doono maaskaro bilaash ah dadka ku nool magaalada iyaga oo adeegsanaya qalabka wax lagu iibiyo.
Warshadaha Isgaarsiinta ee XiangLong wuxuu bixiyaa tayo balaaran oo tayo sare leh, biyuhu kama hortagaan, vandal adkaysi u leh mashiinka iibinta mashiinka furahas. Dhamaan furayaasha waxaa laga sameeyay waara Bir daxal laheyn or zinc alloy. Badhanka dusha, qaabka iyo qaabka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Wixii macluumaad dheeri ah, soo dhowow oo na weydiiso!
Hore: 4x4 kiibood biraha ahama ee lagu rakibey mashiinada iibinta ee Uniqlo
Xiga: Waa maxay mustaqbalka warshadaha ATM-ku?